घट्यो अमेरिकी डलरसहित अरु विदेशी मुद्राको मूल्य | Seto Khabar
घट्यो अमेरिकी डलरसहित अरु विदेशी मुद्राको मूल्य
काठमाडौँ, जेठ १४ । आज मंगलबार जेठ १४ गतेका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिददर रु. ११० रुपैयाँ ९० पैसा तोकेको छ भने, बिक्रीदर रु. १११ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेको छ ।
यसैगरी, साउदी रियाल १ को खरिददर रु. २९ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ भने, बिक्रीदर रु. २९ रुपैयाँ ७३ पैसा छ । कतारी रियाल १ को खरिददर रु. ३० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर रु. ३० रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ भने, यूएई दिर्हाम १ को खरिददर रु. ३० रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३६ पैसा तोकेको छ ।
यसैक्रममा, मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर रु. २६ रुपैयाँ ४९ पैसा छ भने, बिक्रीदर रु. २६ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकेको छ । कोरियन वन एक सयको खरिददर रु. ९ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर रु. ९ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकेको छ ।
कुवेती दिनारको १ को खरिददर रु. ३६४ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर रु. ३६६ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । बहराइन दिनार १ को खरिददर रु. २९४ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर रु .२९५ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाइएको छ ।